अनुसन्धान एजेन्सीको सनसनीखेज खुलासा: श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटना होइन षड्यन्त्र !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अनुसन्धान एजेन्सीको सनसनीखेज खुलासा: श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटना होइन षड्यन्त्र !
डिसी नेपाल , ३१ बैशाख २०७५
मुम्बइ। बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको मृत्युको विषयमा नयाँ खुलासा भएको छ । यो खुलासाले अहिलेसम्म भएका सबै अनुसन्धानलाई शंकाको घेरामा ल्याएको छ । भारतको राजधानी दिल्लीको एक अनुसन्धान एजेन्सीले श्रीदेवीको मृत्यु कुनै दुर्घटना नभएको बरु उनी सोचेर बनाइएको षड्यन्त्रको शिकार भएको दावी गरेको छ ।
दिल्लीका पूर्व एसीपी (असिस्टेन्ट कमिश्नर अफ पुलिस) वेद भूषणको जाँच एजेन्सी पुलिस सोल्युसन इण्डियाले यस्तो दावी गरेपछि अहिले सनसनी मच्चिएको छ । भूषणले आफूले श्रीदेवीको मृत्यु भएको दुबइको होटलमा गएर छानबीन गरेको दावी गर्दै यस्तो खुलासा गरेका हुन् । २४ फेब्रुअरीका दिन दुबइको जुमेराह इमिरेट्स होटलमा श्रीदेवीको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि गरिएको अनुसन्धान र पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उनको मृत्यु दुर्घटनावश बाथटबमा डुबेर भएको भनिएको थियो ।
वेद भूषणको एजेन्सीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रीदेवीको मृत्युको विषयमा केही प्रश्न उठाएको छ । भूषणले दुबइ प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको र निकै छिटो निष्कर्ष निकालेको दावी गरेका छन् । उनले यस विषयमा पुनः अनुसन्धानको लागि सर्वोच्च अदालतमा आवेदन दिने संकेत गरेका छन् ।
वेद भूषणका अनुसार उनको टिमले होटल जुमेराह इमिरेट्स गएर कोठा नम्बर २२०८ मा श्रीदेवीको मृत्यु हुँदाको घटना जस्तै नमूना दृश्य बनाएको थियो । यसरी अनुसन्धान गर्दा टबको गहिराइ र लम्बाइ पनि नापिएको थियो । यद्यपि श्रीदेवीको मृत्यु भने कोठा नम्बर २२०१ मा भएको थियो । भूषणका अनुसार आफूहरुलाई २२०१ मा जान नदिइएपछि उस्तै डेकोरेसन भएको अर्को कोठामा नमूना दृश्य बनाइएको थियो ।
वेद भूषणले पत्रकार सम्मेलनमा दावी गरेअनुसार दुबइ प्रहरीले गरेको अनुसन्धान नाममात्रको छ । भूषणले दुबइ प्रहरीले जारी गरेको डेथ सर्टिफिकेटमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । भूषणका अनुसार उनी होटलमा गएर त्यहाँ भएका व्यक्तिहरु, सिसिटिभी क्यामेराबारे सोध्दा कोही केही बताउन तयार नभएको बताए । उनले प्रहरीले समेत केही जानकारी नदिएको दावी गरे ।
भूषणका अनुसार श्रीदेवीको मृत्युपछि होटलले ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने अधिकांश स्टाफ परिवर्तन गरेको छ । नयाँ आएका स्टाफलाई यस विषयमा केही नबोल्न निर्देशन दिइएको छ । होटल स्टाफलाई श्रीदेवीको मृत्यु भएको कोठा कसैलाई नदिन निर्देशन दिइएको छ । होटलमा व्यक्तिगत भिडियो खिच्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
भूषणका अनुसार दुबइ प्रहरीले विश्वव्यापी रुपमा अनुसन्धानमा प्रयोग हुने वैज्ञानिक तरिका प्रयोग गरेको छैन । श्रीदेवीको फोनको कल डिटेल निकालिएको छैन । उनका पति बोनी कपुरको कल डिटेल समेत निकालिएन । उनले भने ‘ब्लड रिपोर्ट र फोक्सोको अवस्थाको बारेमा कुनै गहिरो जाँच भएको छैन । कोही पानीमा डुब्यो भने उसको फोक्सोमा पानी जान्छ । श्रीदेवीको शरीरभित्र कति पानी थियो भन्ने कसैले भनेकै छैन ।’ उनले श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटनावश डुबेर नभएको बताउँदै के कारणले मृत्यु भयो भन्ने अनुसन्धानको विषय रहेको बताए ।
भूषणले मृत्युको पछाडि धेरै कारण हुने बताए । उनले भने ‘पुलिसले जाँचमा यो पत्ता लगाउने कोसिस गर्छ कि मृत्युबाट कसलाई फाइदा हुन्छ ? श्रीदेवीको मृत्युपछि उनको सम्पत्तिको कानुनी दावेदार को हो ? उनको कसैसँग साझेदारीमा सम्पत्ति छ भने त्यो कसले पाउँछ ? मृत्युपछि बीमाको दावी कसले गर्छ ?’ केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा फिल्म निर्माता सुनील सिंहको तर्फबाट यस विषयमा पुनः अनुसन्धानको माग गर्दै निवेदन दिइएकोमा यो निवेदन खारेज गरिएको छ । यो निवेदनमा सुनीलले ओमनमा श्रीदेवीको नाममा २४० करोडको बीमा भएको र यो बीमा रकम पाउन श्रीदेवीको दुबइमा मृत्यु हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको दावी गरेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध यसरी एकजुट भए विपक्षी
यहाँका महिलाहरुले खान्छन् यौनशक्ति बढाउने औषधि
प्रधानमन्त्री ओली र सांसदबीच चल्यो प्रश्नोत्तरको दाउपेच (भिडियो)
अमेरिकामा राजनीतिक विवाद चुलियो, न्यान्सी पेलोसी र डाभोस बैठकका भ्रमणहरु रद्द
भिडियोः नियम तोड्ने श्रीमानलाई ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत आफ्नै श्रीमतीले पक्रेपछि...
निकै हट छिन् ‘समर लभ’की साया, ४० तस्वीरमा हेर्नुहोस् ‘साया’ बनेकी रेवतीको सेक्सी रुप
‘यस कारण म साउदी अरबबाट भागेँ...’
बिहान दिनहुँ खानुहोस् मेथी भिजाएको पानी, हुन्छ यति धेरै फाइदा
२१ वर्षकी मोडलको फिगरले संसार मोहित, ४० फोटोमा हेर्नुहोस् लोभलाग्दो जवानी
आफ्नो ‘प्लस साइज’ फिगरका कारण चर्चामा छिन् यी मोडल, हेर्नुहोस् २५ सुन्दर तस्वीरहरु
हेर्नुस् नायिका परमिता आरएल राणाका १० हट पोज
समयमै काम नगर्ने कर्मचारीलाई सडकमा यस्तो सजाय दिइयो (भिडियो)
अरुण तेस्रोको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न
श्रीस्वस्थानी व्रतकथा आजदेखि सुरु
कृष्ण ओलीका लागि हेरिस्बर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ सहयोग
दैलेखका क्यान्सर पीडित गणेशलाई उपचारमा समस्या, सहयोगको लागि आग्रह
ब्रजिक्टबारे निर्णय नलिए सुनामी आउने चेतावनी
बंगलादेशमा किन चलेनन् सन्दीप?
बिचौलियालाई ठेगान लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणा
मोलपोत कार्यालयमा यसरी घुस माग्छन् कर्मचारी
इञ्जिनीरिंग कलेजको विवाद समाधान गर्न समिति गठन
बाल यौन दुराचारको आरोपमा रभि भवनबाट विदेशी नागरिक पक्राउ
समृद्ध नेपाल र असल सम्बन्ध कायम राख्न एनआरएनको सदस्याता लिन जरुरी
'झन् बढ्दै छ जरो किलो महाअभियानको मह्त्व'
जापानमा नेपालीबाटै हिंसाकाे सिकार हुँदै नेपाली महिला
जरो किलो महाअभियान र यसको महत्व
न्यायपालिका, न्याय सम्पादन र नेपाल बारको निर्वाचन
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि गगन थापाको प्रतिकृया । Gagan Thapa's comment on PM KP Oli's Speech ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन पछि कांग्रेसको ढ्याप ढ्याप, एमाले सांसदको आपत्ति । Samsad Baithak l
प्रधानमन्त्री ओली र गगन थापाकाे सवाल जवाफ ।PM Kp Oli vs Gagan Thapa ।
सांसद मिनेन्द्र रिजालको प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो- 'अनौठो' l PM KP Oli VS Minendra Rijal l